Inona no mieritreritra ry zalahy mandritra ny firaisana ara-nofo? Io no fanontaniana iray izay angamba no mandrebireby ny vehivavy nanomboka tamin'ny andron'i Adama sy Eva. Taonjato maro izay no lasa, fa mbola vitsy, mety amim-pahatokiana milaza fa mahalala tsara ny zavatra tsy mieritreritra ny mpiara-miasa momba ny firaisana ara-nofo, rehefa. Ny fifanakalozan-kevitra eto ambany explores hevitra vitsivitsy izay mety hameno ny saina ny olona mandritra ny firaisana ara-nofo.
Ny fanantenana tsy ejaculate tsy tonga volana ny
Performance fanahiana nandritra ny firaisana ara-nofo dia zavatra saika ny olona rehetra efa za-draharaha, rehefa manana firaisana ara-nofo. Ho an'ny sasany ny zavatra tsapany ny zavatra tsy tapaka, ny hafa kosa tonga izany ihany ny sasany fotoana manokana toy ny rehefa manana firaisana ara-nofo rehefa ela, fahazoana Cozy amin'ny mpiara-miasa vaovao, sns. Performance fanahiana no tena fanaon'ny olona amin'ny tantaran'ny aloha loatra ejaculation.
Tokony ho toy izany mitoloko, na dia tena ratsy?
Moaning dia anisan'ny misy firaisana ara-nofo. Ry zalahy tsy tena matoky foana momba ny fomba mitoloko. Rehefa manana firaisana ara-nofo, matetika izy ireo no farany nanao ezaka maro mba hahatonga lafatra ny mitoloko. Izany dia noho izy ireo matahotra fa mety miala mitoloko ratsy ny mpiara-miasa eny. Izany, raha ny vadinao na ny namanao dia moaning mitovy amin'ny toe-javatra isan-karazany nandritra ny firaisana ara-nofo, Mety tsy ho ara-boajanahary ary mety fotsiny ho vokatry ny fanandramana Mampitsahatra mba hahatonga lafatra ny moans.
Toy izany ve izy? Ary nahoana izy no tena mangina?
Izany eritreritra ihany koa ny fampisehoana ateraky ny fanahiana izay olona manana firaisana ara-nofo mandritra ny. Ny fanontaniana matetika no mahasorena ny olona toy vehivavy miezaka ny feo kokoa noho ny olona, ​​rehefa manana firaisana ara-nofo; na izany aza, maningana dia foana.
Marina misy vehivavy maro izay mandeha mangina fotsiny satria tsy tia ny mpiara-miasa ny zavatra ataony. Na izany aza, fa tsy foana ny raharaha. Ny sasany hangina kokoa fotsiny izy ireo, satria hijanona mangina.
Tokony ho niresaka maloto?
Misy olona miresaka fotsiny maloto satria tonga ho azy ireo, raha misy olon-kafa izay fa vao mba hiverina ny mpiara-miasa amin'ny. Na izany aza, matetika misy fifanjevoana ao an-tsainy momba ny tena tia ny mpiara-miasa ny mandre teny toy izany nandritra ny firaisana ara-nofo; mitranga izany ny ankamaroany rehefa eo ireo lehilahy ao amin'ny fifandraisana vaovao.
Oh! Lafatra izany
Io no teny iombonana ho an'ny olona iray izay vao nahita mpivady tonga lafatra ny nono na Butts. Mety mihevitra ny olona iray ka raha manomboka mankafy ny asa indrindra. Ny olona an-tsaina koa manomboka mamoaka “ô, lafatra izany” rehefa avy nitory iray miavaka sexy asa iray ny mpiara-miasa.
Mieritreritra ny hafa ny vehivavy
Ny ankamaroan'ny vehivavy dia hahita izany manafintohina, fa matetika ny olona mieritreritra ny hafa ny vehivavy, rehefa manana firaisana ara-nofo. Matetika izany no mitranga rehefa lasa monotonous firaisana ara-nofo rehefa nijanona tao amin'ny fifandraisana nandritra ny taona maro. Raha te-mba ho azo antoka fa ny namanao tsy mieritreritra ny hafa ny vehivavy, rehefa manana firaisana ara-nofo, miezaka ny zava-manitra ny ny fifandraisanareo.
Ireo zavatra vitsivitsy monja fa ny olona iray dia afaka mieritreritra firaisana ara-nofo mandritra. Tsy mety ho hafahafa kokoa eritreritra mananontanona ao an-tsaina ny olona, ​​rehefa manana firaisana ara-nofo arakaraka ny toe-javatra eo an-.